Global Voices teny Malagasy » Iran: “Fanomezana Ho Antsika Ny Aterineto” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Oktobra 2017 1:53 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Miranah
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT), Zon'olombelona
Arsham Parsi  no mpanorina sy talen'ny Fikambanan'ny Pelaka Iraniana ao Toronto, Kanada. Niresaka taminay momba ny fisian'ny pelaka Iraniana eny amin'ny sehatry ny aterineto (cybercafe), ny fanambin'izy ireo sy ny tetikasan'izy ireo izy. Voaràra ao Iran ny fahapelahana, ary voasazy an-tranomaizina na ho faty.
Eny, manana bilaogera Iraniana LGBTIQ  marobe izahay, ary monina ao Iran ny ankamaroan'izy ireo. Manana anaram-bosotra izy ireo ary manoratra tsy mitonona anarana, izay azo antoka kokoa ho amin'ny fiarovana azy ireo, saingy indraindray, tratran'ny governemanta amin'ny alalan'ny adiresy IP izy ireo. Saingy misy izy ireo ary tena mavitrika.
Mazava ho azy, eny, tena hafa tanteraka izany. Manana toe-javatra samihafa izy ireo. Tsy hita maso kokoa ireo lesbiana noho ny tsy fahampian'ny zon'ny vehivavy amin'ny ankapobeny ao Iran. Tsy manana bilaogy lesbiana betsaka izahay, ary ireo fantatro, dia mazoto miezaka milaza fa misy koa ny lesbiana. Manana gazetiboky antserasera, Hamjens-e man  ho an'ny lesbiana izahay. Ity no gazetiboky voalohany ho an'ireo lesbiana Iraniana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/16/108544/
 Arsham Parsi: http://www.arshamparsi.net/
 Fikambanan'ny Pelaka Iraniana : http://www.irqo.net/
 Cheraq : http://www.irqo.net/IRQO/cheraq/
 Hamjens-e man: http://blog.360.yahoo.com/blog-6dhXXwQherTnZuNgH5Wp5qM-?cq=1&p=156